एसइईमा प्राक्टिकलको दुरुपयोग ! – Nepal Reports
Home News Nepal एसइईमा प्राक्टिकलको दुरुपयोग !
Previous Video मुस्ताङ लैजान लागेका ७ बालबालिकको उद्धार
Next Video काठमाडौँमा युवतीहरुको ग्यांग-फाइटमा छुरा प्रहार हुँदा एक युवती गम्भीर घाइते।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ‘एसइई’ मा निजी स्कुलका विद्यार्थीले प्रयोगात्मकतर्फ निकै धेरै नम्बर पाएका छन् । तर सैद्धान्तिकतर्फ भने उनीहरुको प्राप्तांक कम छ । शुक्रबार प्रकाशित नतिजा हेर्दा पोखराका अधिकांश निजी विद्यालयका विद्यार्थीको प्राप्तांक त्यस्तो देखिन्छ । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भने जस्तै निजी विद्यालयले अति कमजोर विद्यार्थीलाई पनि प्रयोगात्मकतर्फ पुरै अंक दिएको पाइएको छ । विद्यार्थीको मार्कसिट ‍(लब्धांकपत्र) मा उनीहरुले प्रयोगात्मकमा ए प्लस ल्याएका छन्, तर सैद्धान्तिकमा भने साह्रै कम छ ।
एक विद्यार्थीले अंग्रेजीमा सैद्धान्तिकतर्फ ‘बी’ ल्याएका छन् भने प्रयोगात्मकमा ‘ए प्लस’ ल्याए । त्यसैरी कम्प्युटर साइन्समासैद्धान्तिकमा ‘इ’ अर्थात सबैभन्दा कम ल्याए भने सोही विषयको प्रयोगात्मकमा ‘ए प्लस’ ल्याएका छन् । अन्य विषय जनसंख्या तथा वातावारणमा ‘सी’ र अकाउन्टमा ‘डी’ ल्याए भने यी दुवै विषयको प्रयोगात्मकतर्फ ‘ए प्लस’ ल्याए ।
प्रयोगात्मकतर्फको नम्बर विद्यालयले नै पठाउँछ । तर सैद्धान्तिकको कापी जिल्लाबाहिर जाँचिन्छ र कुन ठाउँका कस्ता शिक्षकले जाँच्छन् भन्ने विद्यार्थी र विद्यालयले थाहा पाउँदैनन् । ‘स्कुलको रिजल्ट राम्रो बनाउन बोर्डिङ स्कुलले कमजोर विद्यार्थीलाई पनि प्रयोगात्मकमा ए प्लस नम्बर दिएर आफ्नो हात जगन्नाथ गरेका छन्,’ एक शिक्षकले भने, ‘होइन भने उही विषयको प्रयोगात्मक विषयमा ए प्लस आउनेको सैद्धान्तिकमा ई आउँदैन ।’ एक दुई जनाको त्यस्तो भएको भए अपवाद मान्न सकिए नि अधिकांशको त्यस्तै नतिजा देखिएकाले विद्यालयले नै प्रयोगात्मकमा धेरै नम्बर दिएको उनी बताउँछन् ।
प्रयोगात्मकमा जथाभावी नम्बर दिन कडाइ नगर्ने हो भने विद्यार्थीहरुमा प्रयोगात्मक कुनै परीक्षा जस्तो नभई नम्बर बढाउने वहाना जस्तो हुने ती शिक्षक बताउँछन् । ‘विद्यालयले पाएको अधिकारको सदुपयोग नभई दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने । तर कुनै विद्यार्थी सैद्धान्तिकमा भन्दा प्रयोगात्मकमा अब्बल हुन सक्ने तर्क गर्छन् कास्कीका उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र ढकाल। ‘कुनै विद्यार्थी लेख्न कमजोर हुन सक्छ तर त्यही कुरा प्राक्टिकलमा राम्रो गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सबै विद्यार्थी त्यस्तै हुन्छ भन्न नि मैले खोजेको होइन प्राय विद्यार्थीहरु सैद्धान्तिकमा भन्दा प्रयोगात्मकमा अघि हुन्छन् ।’ विद्यालयले प्राक्टिकल नम्बर दिँदा ख्याल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
previous मुस्ताङ लैजान लागेका ७ बालबालिकको उद्धार
next काठमाडौँमा युवतीहरुको ग्यांग-फाइटमा छुरा प्रहार हुँदा एक युवती गम्भीर घाइते।